कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी रेहान हवारि सहनलाइ अभय कुमार पाण्डेले कुट’पि’ट गरे पछि यस्तो भयो!! – News Nepali Dainik
कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी रेहान हवारि सहनलाइ अभय कुमार पाण्डेले कुट’पि’ट गरे पछि यस्तो भयो!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: १७:१८:२०
अम्बा टिपेको निहुँ कलैयामा एक विद्यार्थीलाइ स्थानियलाइ नि,र्मम कुट’पिट गरेको छन् । बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित श्री पान्ना देवि माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी रेहान हवारि सहनलाइ विद्यालय छेउ बसोबास गर्ने अभय कुमार पाण्डेले कुट’पि’ट गरेका हुन् ।
मंगलबार दिउँसो कक्षाकोठा भित्र प्रवेश गरि पाण्डेले विद्यार्थी हवारीलाइ कुट’पि’ट गरेको बताइएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार कक्षाकोठाबाट जब’रज स्ती फिल्डमा ल्याइ विद्यार्थी हवारी उपर कुट’पिट भएको हो ।विद्यालय छेउमा रहेको पाण्डेको घरमा अम्बा को बोट छ । खाजा खाने समयमा विद्यार्थीहरूले अम्बा टिप्ने प्र’यत्न गरेका थिए । स्थानियहरूका अनुसार पाण्डेको अम्बो बोटमा फल छैन ।
उनले पुरानो रिसै’वी साँध्नका लागि विद्यार्थी हवारीलाइ कु’टेको हुनसक्ने बुझिएको छ। कुट’पिटबाट ग’म्भी’र घा’इते भएका हवारीको बीरगन्ज स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विद्यार्थी कुट’पि’ट गर्ने अभियुक्तलाइ बुधबार प’क्रा उ ग’रि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
Last Updated on: March 4th, 2021 at 5:18 pm